क्रेग रसलसँग कुराकानी गर्दै। उनको पुस्तकहरु, पठन र साहित्यिक पानोरामाबाट। | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | साक्षात्कार, लेखकहरू, किताबहरु, कालो उपन्यास
क्रेग रसल पुस्तकहरु। पृष्ठभूमि फोटो: जोनाथन रसल।
उहाँसँग जारी छ सुन्दरी लेखकहरूलाई उनीहरूको पढाई बताउनआज हामीसँग छ क्रेग रसल। सफल स्कटिश अपराध उपन्यास लेखक धेरै दयालु जवाफ दिए अन्तिम शुक्रवार मेरो प्रश्नहरूको लागि पहिला ट्विटर मार्फत र त्यसपछि अधिक विस्तृत रूपमा, फेसबुक मार्फत।
रसल छ सिर्जनाकर्ता को कुशल क्यूरेटर जान Fabel, ह्याम्बर्ग पुलिसको। पनि धेरै विडम्बनापूर्ण र कठोर डिटेक्टिव लेनोक्स १ 50 s० को दशकको ग्रेर ग्लासगो बाट। रसल यी मध्ये एक हो पछाडि र कालो विधा को लेखक मान्यता। यो तपाईसँग पहिलो पटक छैन जब तपाईं म जस्तै आफ्ना पाठकलाई जवाफ दिनुहुन्छ। त्यसो भए हामी उसको कामको समीक्षा गर्छौं, तपाइँको पठन हातमा र हामी एक निश्चित सम्पादकीय परिदृश्य विश्लेषण गर्दछौं। यहाँबाट मेरो धन्यवाद तपाईंको सौहार्दपूर्णतामा।
क्रेग रसेल मा जन्म भएको थियो 1956 को काउन्टीमा मुरली, स्कटल्याण्ड। उहाँ हाल जीवित हुनुहुन्छ, आफ्नै शब्दहरू अनुसार, "ब्रुस र वालेस देशको मुटुमा र म यसलाई धन्यबाद भएको महसुस गर्दछु"।। स्कटल्याण्ड र राजा रोबर्ट प्रथम द ब्रुसको ऐतिहासिक व्यक्तित्वको लागि मेरो प्रशंसा व्यक्त गर्दा उनले यही जवाफ दिए। बहादुर)। उनी पनि लेखक हुन् छोटो कथाहरु.
हामी भन्छौ, आफ्नो सबैभन्दा प्रसिद्ध जीवहरू तिनीहरू जर्मन-स्कटिश आयुक्त हुन् जान फेबेल, को श्रृंखला Books पुस्तकहरु स्थापीत हुनु ह्याम्बर्ग अधिक अनुवाद गरिएको छ २० भाषाहरू। संयोजन संयोजन, एक मध्ये लेनोक्स, एक पूर्व क्यानेडाली सिपाही निजी जासूस बने, उनीसँग उनी 50० को दशकको ग्लासगोको बिल्कुलै भिन्न दृश्यमा परिवर्तन भए।
पनि लेख्नुहोस् अन्य प्रकारका उपन्यासहरू (बाइबलीय) को उपनाम सहित क्रिस्टोफर ग्यालेट.
1 जन फेबेल श्रृंखला
2 लेनोक्स श्रृंखला
3 तपाईंको हालको पठनहरू
4 निश्चित प्रकाशन दृश्यमा
जन फेबेल श्रृंखला
धेरै गम्भीर, सीधा र कुशल जान Fabel उनले सिरियल किलरहरू, विभिन्न साइकोपेथहरू र ट्राउमाजका सबै तूफानहरूलाई घेरेका छन्। उसको अक्षमता, बुद्धिमानी र शान्त नेतृत्व कौशल र एक शानदार टीम उनको कमान्डमा तिनीहरूले उसलाई लाखौं पाठकहरूको प्रशंसा कमाए। र तिनीहरूको केसहरूमा सामान्यतया ठूलो हुन्छ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र निश्चित पौराणिक सन्दर्भ.
उनका उपन्यासहरू अनुकूलन गरिएको छ टेलीभिजन जर्मन एआरडी द्वारा महान संग दर्शकहरूको सफलता.
ह्याम्बर्गमा मृत्यु (रगत ईगल, 2005)
मृत्युको कथा (भाइ grimm, 2006)
Resurrección (अनन्त, 2007)
कार्निवलका प्रभु (कार्निवल मास्टर, 2008)
वाल्कीरीको बदला (वाल्कीरी गीत, 2009)
अँध्यारो पानीको डर (अँध्यारो पानीको डर, 2011)
Altona को भूत, 2015 - स्पेनमा प्रकाशित छैन
लेन्नक्स, फ्याबेल विपरीत, अपराइट वा अर्थोडक्स बाहेक केहि हो। उदासिन भन्दा पनि बढि यो कडा (वा त्यति गाह्रो छैन) पूर्व क्यानेडाली सेना पानी पछि माछा जस्तै एक युद्ध पछि ग्लासगो चिसो जस्तै अन्धकार छ सार्छ। दिनदिनै लाइभ गर्नुहोस् र पुलिसका साथीहरूसँग जस्तो व्यवहार गर्नुहोस् शहरको सब भन्दा महत्वपूर्ण अपराधीहरूसँग। तिनीहरूको कथा पनि छ योजनाबद्ध अनुकूलन बीबीसी द्वारा
ग्लासगो चुम्बन (लामो ग्लासगो चुम्बन, 2010)
गहिरो कालो निद्रा (गहिरो गाढा निद्रा, 2011)
मृत पुरुष र टूटेको हृदय, 2012 - स्पेनमा प्रकाशित छैन
तपाईंको हालको पठनहरू
के मैले उद्धरण र अनुवाद:
अहिले, म पढ्दै छु उच्च सिएरा WR Burnett द्वारा। मलाई यसको फिल्म संस्करण मनपर्‍यो (हम्फ्रे बोगार्टसँग) जब म बच्चा थिएँ तर पुस्तक पढ्नको लागि मात्र गोल भयो। यो शैली मा आश्चर्यजनक समकालीन हो। म पनि अग्रिम प्रतिलिपि पढ्दै छु स्मृति लोप, द्वारा माइकल Ridpath Sc यो स्कटल्याण्डमा एक अचम्मै वास्तविक थ्रिलर सेट छ। रिद्पाथ एक लेखक हुन् जसको म प्रशंसा गर्छु स्मृति लोप उसको सबैभन्दा राम्रो हुनु पर्दछ। मेरी श्रीमतीले मलाई भर्खर अमेरिकी लेखक जर्ज सॉन्डर्स द्वारा छोटो कथाहरूको पुस्तक किन्नुभएको छ, त्यसो भए पछि आउनेछ!
अब म पढ्दै छु उच्च सिएरा, WR Burnett द्वारा। मलाई फिल्मको संस्करण (हम्फ्रे बोगार्टसँग) मन परेको थियो जब म सानो थियो तर पुस्तक पढ्न समय खोजिरहेको थिएँ। यो यसको शैली मा आश्चर्यजनक समकालीन हो। म पूर्वावलोकन को एक प्रतिलिपि पनि पढ्दै छु स्मृति लोपमाइकल Ridpath द्वारा, स्कटल्यान्ड मा एक उल्लेखनीय मूल थ्रिलर सेट। रिद्पाथ एक लेखक हुन् जसको म प्रशंसा गर्छु स्मृति लोप उनको सबै भन्दा राम्रो काम गर्ने वाचा गर्दछ। मेरी श्रीमतीले मलाई अमेरिकी छोटो कथाको किताब किन्नुभयो जर्ज Saunders, ताकि अर्को हुनेछ।
निश्चित प्रकाशन दृश्यमा
जाँच गर्न पनि उनलाई केहि थाहा छ कि किन भनेर, मैले भने उनको भर्खरको पुस्तकहरु को प्रकाशन को अवरोध को बारे मा मेरो गुनासो यहाँ स्पेनमा।
यसको उत्तर स्पेन सधैं एक महत्त्वपूर्ण बजार भएको छ उसको लागि र उसले गरेका सबै कार्यहरू उसले प्रेम गरेको छ। यो पनि देखायो सहमत छु यो एउटा घरजग्गा हो त्यो त्यहाँ अवरोध भएको छ। उनले कुरा गरे आर्थिक स for्कटका कारणहरू त्यो यहाँबाट प्रकाशकले दिएको छ। र उनले गुनासो गरे किनभने उनी उनीहरूप्रति अत्यन्त वफादार लेखक थिए।
उनले भने कि उनको एजेन्टहरू नयाँ प्रकाशकको ​​खोजीमा छन्तर तिनीहरू जान्दछन् कि यो के हो त्यो गाह्रो छ अर्को द्वारा पहिले नै प्रकाशित गरिएको श्रृंखला प्रकाशित गर्नुहोस्। यो आफैले देखायो निराश भन्दा बढी निराश किनभने पछिल्लो उपन्यास दुबै Fabel र Lennox सबैभन्दा सफल भएको छ। तर यो पनि थियो नयाँ प्रकाशक फेला पार्ने आशामा र हामी ती यहाँ वरिपरि हुन सक्छ, को लागि "सब भन्दा उत्साहित दर्शकहरु मध्ये एक".
जे होस्, यो मेरो लागि महिनाको साहित्यिक क्षण हो। म रसलको ठूलो प्रशंसक हुँ र म फेरि उनीहरुसंग सहज र न्यानो टोनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।। यो सधैं अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय लेखकहरूको मामलामा हुँदैन। तर निश्चय पनि रसल प्रशंसित छ। र जो अझै पनी Fabel वा Lennox चिन्नुहुन्न, अब उनीहरूलाई पढ्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » क्रेग रसलसँग कुराकानी गर्दै। उनको पुस्तकहरु, पठन र साहित्यिक पानोरामाबाट।
नमस्कार, हामीलाई जानकारी दिनु भएकोमा धन्यवाद, मैले स्पेनिश भाषामा लेखेका सबै लेन्नोक्स पढेको छु, म स्पेनिशमा अन्तिम "डेड मेन र ब्रोकेन हार्ट्स" को प्रतीक्षा गर्दैछु, अवश्य ... मलाई थाहा भएन कि समस्या भेटियो एक प्रकाशक, म आशा गर्छु कि यो छिट्टै नै ठिक हुनेछ।
African लेखक अफ्रिकी साहित्यमा पुग्न